Global Voices teny Malagasy » Etiopia: Ny fiovàna entin’ny rano · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 03 Febroary 2009 16:29 GMT 1	 · Mpanoratra Juliana Rincón Parra Nandika avylavitra
Sokajy: Etiopia, Ady & Fifandirana, Fahasalamàna, Fampandrosoana, Hafanàm-po nomerika, Tanora, Vonjy Voina
Tamin’ny faran’ny taona lasa teo, fianakaviana dimy no nanapa-kevitra fa ny fitsidihana an’i Etiopia miaraka amin’ny zanany vavy no fomba tsara indrindra ho azy ireo mba ahafantarany hoe hatraiza no nahafahan’ny fanampiana nomeny hampidirana rano madio sy azo antoka nanova ny fiainan’ny fianakaviana maro sy tanàna iray manontolo. Amin’ny alalan’ny blaoginy sy ampahan-tsariny, afaka nampiseho izy ireo ny torena lehibe noraisin'ny charity:water  tamin’ny fanatanterahana izany, ary manantena fanampiana bebe kokoa sy handrisika olona bebe kokoa hanampy.
Tamin’ny lohataonan'ny 2008, nisy mpanome fanampiana avy ao amin’ny charity: water  nilaza fa hitondra ny zanany vavy 9 taona handeha any Afrika. Nangataka taminy aho raha afaka miaraka amin-dry zareo miaraka amin’ny zanako vavy Julia izay sivy taona ihany koa. Toa izay efa mpitranga hatrizay miaraka amin'i Scott Harrison , mpanangana ny charity: water, nitatra be ilay drafitra. Tao anatina herinandro vitsy dia nahavory zazavavy dimy miaraka amin’ny rainy tsirairay avy ny dia. Indrisy anefa, niala an-daharana ilay mpanome fanampiana izay nipoiran'io dia lavitr'ezaka io ka nentiko ny zanako vavy matoa, Katie. Noho izany zaza vavy dimy sy ray efatra ary Scott no handeha any Ethiopia ny herinandro manaraka. Nampitondrainay “camera” Flip kely efatra ireo zazavavy, amin’izay dia samy ho afaka miteny ny mombamomba azy avy, afaka mitantara ny androny sy ny tantaran’ny olona izay mifanena taminy.
Five for Water  no anaran’ny blaogy noforonin’ireo fianakaviana ireo mba hanentanana ny olona amin’ny toe-piainan’ny zaza any Etiopia: mba hampisehoana hoe mety hanova zava-dehibe eo amin’ny fiainany ny rano madio, ary izany no antony tokony hirosoan'ny olona bebe kokoa (sy ireo sekoly) amin’ny ezaka fanampiana.
Ao amin’ny ampahan-tsary etsy ambony, izay hita ato amin’ity lahatsoratra ity , hitan’i Campbell kely fa betsaka ny zavatra iraisany amin’ireo zaza Etiopiana fa tsy araka izay noeritreretiny tany am-boalohany: mitovy ny zavatra resahana ao amin’ny fampianarana matematika.
Na izany aza, misy fahasamihafana goavana vitsivitsy ihany, toy izay soratan’ i Chloe, iray hafa tamin’ireo zazavavy:
Taoriana kely, tamin’izaho naka sary ireo zazakely, nanazava tamiko i Gebre fa tsy dia tena azon’ireo olona ireo akory izany atao hoe fakantsary sy sary izany. Tamin’izaho nampiseho azy ireo teo amin’ny fàfana (écran) tamin'ilay fakantsary ireo sary nalaiko, dia toa nikorontana ny sain’izy ireo. Nitantara tamiko i Gebre fa naka sary ankizilahy telo izy, dia nampiseho izany tamin'ny iray tamin’ireo ankizilahy sady nanontany azy hoe iza no eo amin’ilay sary. Niteny ilay ankizilahy hoe “ny namako roa ireo, fa tsy fantatro hoe iza ity iray ity (sady nanondro ny tenany teo amin’ny sary izy). Mazava ho azy izany fa tsy fantany hoe hoatran’ny inona no bikany, sady ry zareo koa moa tsy manana fitaratra, amiko dia tsy dia azoko loatra ilay izy, satria izaho mijery fitaratra foana alohan’ny handaozako ny trano, mba hijereko hoe tsy misy ambina “dentifrice” ve na potika hanina eny amiko. Nefa aty dia tsy raharahain-dry zareo izany, ny tsy mahafantatra hoe hoatran’ny inona ny tena! Samihafa be ny aty, tahaka ny tontolo roa samy hafa.
Na koa ity nosoratan’i Carley  ity:
Nitsidika sekoly iray izahay. Tena nahantra kely ilay izy… Nampalahelo be… Ary nampieritreritra ahy izany hoe tena tsara vintana aho. Betsaka amin’ireo efitrano fianarana no tsy misy dabilio akory, ka mipetraka amin’ny vato ry zareo. Nisy fafàna lehube (solaitra be) feno lavadavaka tao…
Nankany amin’ny tranom-boky aho, nisy boky eo amin’ny 20 eo tao. Bokina tantara no ankabeazany, fa maro tamin’ireo no miresaka momba ny VIH-SIDA.
Naka ampahan-tsary  ireo zazavavy mitondra siny vy feno rano i Campbell, ary mitantara fa:
Rehefa tsy misy ny rano, dia matetika ny ankizivavy no tsy maintsy mandeha lavitra ary mitondra rano mavesatra. Manakana an-dry zareo tsy hanao ny enti-modiny izany. Taty dia nifanena tamina zazavavy iray nitondra rano be dia be aho omaly hariva.
Ny antony voalohany mahatonga ny zazavavy miala amin’ny fianarana dia satria tsy manana rano madio na trano fidiovana ry zareo.
Ny fanomezana rano an’ireo vahoaka ireo dia mila fanampiana mba handoavana ny saram-pandavahana ny lava-drano sy ny fametrahana izany. Ato amin’ity lahatsoratra sy ampahan-tsary  ity, manazava ny fomba fandavahana ny lava-drano atao tànana ry zareo:
Misy fomba maro ahafahanao mitondra fanampiana, iray amin’izany, ho avy tsy ho ela ny Twestival.
Ny Twestival  dia fihetsiketsehana iraisam-pirenena izay karakaraina vondrona mpampiasa ilay micro-blogging fanta-daza, Twitter, ary hatao ny faha-12 Febroary ho avy izao, ary maherin’ny tanàna 100 no handray anjara. Zato isan-jaton’ny tombon-tsoa avy amin'izany dia halefa avokoa any amin’ny fikambanana Charity:Water , ary vokatr’izany dia nihavao indray ny fomba fijery olan'ny rano; ny tsy fahampian’izany, ny fahadiovany sy ny fahazoana azy. Afaka mamaky bebe kokoa momba izany hetsika feno fanoloran-tena izany ianao, ary ny fomba fandraisanao anjara : na amin’ny fikarakarana Twestival any amin’ny tanàna misy anao, na amin’ny fandraisana anjara amin’ny aterineto.
Ny fitondrana rano by magnusfranklin 
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2009/02/03/1537/
 izay hita ato amin’ity lahatsoratra ity: http://54h2o.blogspot.com/2009/01/blog-post.html
 nosoratan’i Carley: http://54h2o.blogspot.com/2009/01/this-is-trip-of-lifetime-i-will-never.html
 lahatsoratra sy ampahan-tsary: http://54h2o.blogspot.com/2009/01/about-hand-dug-wells.html
 Ny fitondrana rano by magnusfranklin: http://www.flickr.com/photos/adjourned/3069327644/